နားကြပ်အမြဲတပ်လေ့ ရှိတဲ့သူတွေ သတိထားသင့်တဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ...! - Thadin
HomeHEALTHYနားကြပ်အမြဲတပ်လေ့ ရှိတဲ့သူတွေ သတိထားသင့်တဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ…!
June 11, 2019 Kay Kay HEALTHY Comments Off on နားကြပ်အမြဲတပ်လေ့ ရှိတဲ့သူတွေ သတိထားသင့်တဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ…!
headphones သို့မဟုတ်နားကြပ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသင့်ရဲ့နားထဲကိုအသံကအနီးကပ်တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။90 decibels ထက်ကျော်တဲ့အသံအတိုင်းအတာကအကြားအာရုံမှာနောက်ဆက်တွဲထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။နေ့စဉ်headphones နဲ့နားကြပ်တပ်ပြီးနားထောင်လေ့ရှိသူတွေဟာအကြားအာရုံဆုံးရှုံးဖို့ရာခိုင်နှုန်းအလွန်များပါတယ်။100 decibels ထက်ကျော်တဲ့အသံနှုန်းကို၁၅မိနစ်လောက်နားထောင်ရုံနဲ့ပဲဒီအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်ရပါတယ်။
နားကြပ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့sound system ကောင်းမွန်ကြောင်းကြော်ငြာကြမှာပါပဲ။သို့ပေမယ့်အသံဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းကျန်းမာရေးရှုထောင့်အရတော့ကိုယ့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုမူတည်ပြီးထိခိုက်မှုအနည်းနဲ့အများရှိလာစေနိုင်ပါတယ်။နားထဲကိုနားကြပ်ထိုးထည့်ထားရင်ပဲလေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့စေနိုင်ပါတယ်။လေအဝင်အထွက်မရှိရင်သိချင်းသံပိုနားထောင်ကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့်နားပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်လာနိုင်ခြေများပါတယ်။
တစ်နေကုန်အသံအကျယ်ကြီးနဲ့နားကြပ်အသုံးများတဲ့သူတွေဟာအကြားအာရုံခေတ္တပျောက်ဆုံးတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုnumb ears ဖြစ်ပြီးရင်ခဏနေတာနဲ့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒီအခြေအနေကအန္တရာယ်များတဲ့အပြင်တကယ်နားမကြားတော့တဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နားကြပ်တွေ၊headphone တွေဆီကထုတ်လွှတ်တဲ့လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေကဦးနှောက်ကိုပြင်းထန်တဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုသက်သေပြဖို့တော့လုံလောက်တဲ့ဆေးပညာအထောက်အထားတော့မရှိသေးပါဘူး။Bluetooth ၊headphone နဲ့နားကြပ်ကိုနေ့စဉ်သုံးသူတွေဟာဦးနှောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေပိုအဖြစ်များတာတွေ့ရပါတယ်။နားအတွင်းပိုင်းဟာဦးနှောက်နဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်ပြီးနည်းနည်းလောက်ပိုးဝင်ရင်တောင်ဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
headphones သို့မဟုတျနားကွပျကိုအသုံးပွုတဲ့အခါသငျ့ရဲ့နားထဲကိုအသံကအနီးကပျတိုကျရိုကျဝငျရောကျလာတာဖွဈပါတယျ။90 decibels ထကျကြျောတဲ့အသံအတိုငျးအတာကအကွားအာရုံမှာနောကျဆကျတှဲထိခိုကျမှုတှဖွေဈလာစနေိုငျပါတယျ။နစေ့ဉျheadphones နဲ့နားကွပျတပျပွီးနားထောငျလရှေိ့သူတှဟောအကွားအာရုံဆုံးရှုံးဖို့ရာခိုငျနှုနျးအလှနျမြားပါတယျ။100 decibels ထကျကြျောတဲ့အသံနှုနျးကို၁၅မိနဈလောကျနားထောငျရုံနဲ့ပဲဒီအန်တရာယျကိုစိုးရိမျရပါတယျ။
နားကွပျထုတျလုပျတဲ့ကုမ်ပဏီတှကေတော့sound system ကောငျးမှနျကွောငျးကွျောငွာကွမှာပါပဲ။သို့ပမေယျ့အသံဘယျလောကျပဲကောငျးကောငျးကနျြးမာရေးရှုထောငျ့အရတော့ကိုယျ့ရဲ့အသုံးပွုမှုကိုမူတညျပွီးထိခိုကျမှုအနညျးနဲ့အမြားရှိလာစနေိုငျပါတယျ။နားထဲကိုနားကွပျထိုးထညျ့ထားရငျပဲလလေမျးကွောငျးပိတျဆို့စနေိုငျပါတယျ။လအေဝငျအထှကျမရှိရငျသိခငျြးသံပိုနားထောငျကောငျးတယျဆိုပမေယျ့နားပိုးဝငျခွငျးဖွဈလာနိုငျခွမြေားပါတယျ။
တဈနကေုနျအသံအကယျြကွီးနဲ့နားကွပျအသုံးမြားတဲ့သူတှဟောအကွားအာရုံခတ်ေတပြောကျဆုံးတတျပါတယျ။အဲ့ဒီလိုnumb ears ဖွဈပွီးရငျခဏနတောနဲ့ပုံမှနျပွနျဖွဈလာပါတယျ။ဒီအခွအေနကေအန်တရာယျမြားတဲ့အပွငျတကယျနားမကွားတော့တဲ့အထိဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
နားကွပျတှေ၊headphone တှဆေီကထုတျလှတျတဲ့လြှပျစဈသံလိုကျလှိုငျးတှကေဦးနှောကျကိုပွငျးထနျတဲ့အန်တရာယျတှဖွေဈစနေိုငျပါတယျ။ဒါကိုသကျသပွေဖို့တော့လုံလောကျတဲ့ဆေးပညာအထောကျအထားတော့မရှိသေးပါဘူး။Bluetooth ၊headphone နဲ့နားကွပျကိုနစေ့ဉျသုံးသူတှဟောဦးနှောကျနဲ့ပတျသကျတဲ့ရောဂါတှပေိုအဖွဈမြားတာတှရေ့ပါတယျ။နားအတှငျးပိုငျးဟာဦးနှောကျနဲ့တိုကျရိုကျခြိတျဆကျနတောဖွဈပွီးနညျးနညျးလောကျပိုးဝငျရငျတောငျဦးနှောကျကိုထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။
This Year : 278027
Total Users : 637051
Total views : 2985070